PTFE Camera Rubber Seals
Tank Isitsha Izingxenye elingasebenzi
ukuhweba Mahhala isivumelwano South Korea kusula ukhubeka
Izimpahla kanye namasevisi kwezohwebo ophakathi China neNingizimu Korea isethelwe eqa quantum emva ngabomvu ukuhweba khulula isivumelwano phakathi kwalawa mazwe amabili ewela ukhubeka kubalulekile zomthetho ngoMsombuluko. Sikazwelonke South Korea wanikeza ukukhanya eliluhlaza kuya zamazwe amabili ukuhweba isivumelwano B ...
Louisiana ubukeka zokuthuthukisa China yayo ukuhweba
Pushing Ubuchwepheshe emafutheni, ukukhiqizwa zamakhemikhali, ebheka phambili zezindiza kanye nezindiza mkhathi Louisiana ufuna parlay izimfanelo zayo e uwoyela negesi yemvelo kanye ukukhiqizwa chemical ku enwetshiwe zokuhweba izibopho China, ngokuvumelana phezulu olusemthethweni ukuthuthukiswa komnotho yembuso. Don Pierson kwaba ...
Inani PTFE liphuma crazily!
Ngokusho isimo yomnotho womhlaba, intengo PTFE uvukile ngo-30%, thina ukubikezela ngama-60% ngo-2017.We ukuphakamisa wonke amakhasimende ahlele oda annsual 2017 njengoba nje possible.It kunenzuzo ngathi ukwenza ilungiselelo ukukhiqizwa, isitokwe makabe nawe ujabulele intengo 2016.
Global Tank Isitsha e 2017
I global ithangi esitsheni imikhumbi sicuketse tinhlobo ithangi kuhlanganise amathangi ngoba uketshezi, amagesi kuncibilike, izimpushana, ushintshanise amathangi kanye Okukhethekile. Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha ngezansi 20ft obuphelele njengalezo evamile umkhakha sogu lolwandle uwoyela akufakiwe kulolu Survey. Gilazi ithangi kakhulu ezilawulwayo futhi ...
Izimpahla kanye namasevisi kwezohwebo ophakathi China i ...
Pushing Ubuchwepheshe emafutheni, amakhemikhali produc ...
Ngokwe-s yetemnotfo ...
I global ithangi esitsheni imikhumbi yakhiwa ...